Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छु : महानगरप्रमुख महर्जन
रासस बिहीबार, जेठ १२, २०७९
ललितपुर । कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति नै दोहोरिनुभएको छ । पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उहाँ पुनस् विजयी हुनुभएको महानगरवासी बताउँछन् । विगतमा तीन पटकसम्म वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्नुभएका उहाँले ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । उहाँसँग गरेको संवाद।।।
महानगर कला नगरी हो र यहाँ प्रशस्त सम्पदाहरु छन् । मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक सम्पदामा सुधार भइरहेको छ । भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भीमसेन मन्दिर सरकारसँग कति पनि पैसा नलिई पुनस्निर्माण गरिएको छ । सरकारसँग पैसा लिँदा ठेक्कामा काम गर्नुपर्छ र ठेक्कामा गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम नहुने भएकाले चन्दा सङ्कलन गरेर त्यसको निर्माण गरिएको छ । सम्पदाका पाँच छवटा परियोजना जारी छन् र त्यो पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
तपाईले अघिल्लो कार्यकालमा जनतासँग गर्नुभएका सबै प्रतिबद्धता पूरा भए ?
साइकल लेन निर्माण भयो तर छुट्टै लेन नभएकाले अझै सुरक्षित नभएको कुरा उठ्छ । साइकल लेन विकास र विस्तारको योजना के छ रु
सवारी साधनको चाप बढिरहँदा पैदल यात्रुलाई सडक वारपार गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ । आकाशे पुल निर्माणको योजना छ रु
हामीले २१ औँ शताब्दीको स्मार्ट ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने योजना बनाएका छौँ । हामीले अब जडान गर्न बत्ती एउटा बत्ती अर्को स्थानको बत्तीसँग आपसमा सञ्चार गर्न सक्ने किसिमको हुनेछ । एकातिर भीड भएमा अर्कोतिर पठाउन समन्वय हुनेछ । यस्ता बत्ती बागमती पुलबाट जावलाखेलसम्म पाँच ठाउँमा राखिनेछ ।
स्थानीय तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार राम्रो छैन । कोभिडका कारण र ऐनको अभाव हुँदा धेरै प्रगति छैन । हामीसँग भएका स्वास्थ्यचौकी सशक्त बनाउनुपर्छ । महानगरमा सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग गरेको छैन । कोभिडको समयमा देशका ६९० स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन रु १०र१० करोड दिँदा हामीलाई दिइएको थिएन । यहाँ ठूलाठूला अस्पताल छन् भन्ने सरकारको भनाइ छ ।
महानगरमा पहिले निर्वाचित भएर आएको आठरनौ महिनामा नै ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहर फाल्न पाइएन । यहाँँ पनि फोहर छरपष्ट भयो र गाली खानुपर्‍यो । त्यसपछि आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दक्षिणी भेगमा जग्गा अधिग्रहण गरेर काम अघि बढाएका थियौँ । महानगरको वडा नम्बर २१ र २२ मा हामीले छानेको जग्गामा त्यो काम गर्न हुँदैन भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र पठाएकाले रोकिएको थियो । त्यो ठाउँ उडानको रुटमा पर्ने र फोहरले गर्दा चिललगायतका चराचुरुङ्गीले बाधा गर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो । गोदावरी नगरपालिकासँगमा कुरा भए पनि केही हुन सकेन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची आयो र पुन ः रोकियो, हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ । मेलम्चीमा पचासौँ वर्षमा परेकोभन्दा बढी पानी परेकाले आयोजनामा क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० औँ लाख बस्छन् यहाँ एउटै स्रोतबाट पानी खुवाउँछु भन्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत विचार गर्नुपर्छ भनेर गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग मिलेर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको प्राविधिक डिजाइनमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउन काम सुरु गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ । अहिले सिस्नेरी खोलाबाट पानी खेर गरेको छ त्यो ल्याउँदा दैनिक १३ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरममा १८ पालिका थियौँ । पाँच वर्षमा धेरै प्रगति भएन त्यो सिकेर आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ । विगत पाँच वर्षमा फोहर विर्सजनमा नै ध्यान गएको थियो र सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । हामीले अहिले पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । साइकल लेनमा सबैले मिलेर गर्न सकिन्छ । एउटाबाट सिकेका काम अर्कोले गर्न सकिन्छ । वातावरणसम्बन्धी काम गर्न राम्रो मञ्च हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १२, २०७९, १४:००:००